Ikhtiyaarada Thanksgiving ee tabaruceyaasha iyo kuwa raadinaya cunto - Meals on Wheels
Ikhtiyaarrada mahadnaq ee mutadawiciinta iyo kuwa cuntada raadinaya
Maalin udub dhexaad u ah cunno weyn, qofna waa inuusan ka fekerin halka ay ka imaaneyso cunnadooda Thanksgiving. Barnaamij kasta oo Cunno ah ayaa la siiyaa ikhtiyaar ah in la helo cunnooyin qabow ama qabow ka hor si ay macaamiisha u heli doonaan cunto laga heli karo Thanksgiving iyo maalmaha ka dambeeya. Tiro ka mid ah barnaamijyadeenna ayaa sidoo kale ku bixiya cunnooyin kulul Kullan Mahadcelin ah.
Waxaan sidoo kale helnaa codsiyo badan oo ku saabsan cuntada kulul gaar ahaan Thanksgiving, iyo codsiyada fursadaha iskaa wax u qabso sidoo kale! Hoos waxaa ku yaal xulashooyinka qaarkood haddii aad raadineyso cunno kulul oo si gaar ah loogu geeyo Thanksgiving, ama qaab aad dib ugu celin karto intaadan mahadcelin.
Hadaad cunto raadinayso
Cunnooyinka Mahadcelinta ee Wheels
Barnaamijkani wuxuu ka madax bannaan yahay barnaamijyada Cuntada ee Dhirta Cunnada oo bixiya cunno joogto ah waxayna kaliya ku bixiyaan cunnooyinka sanadkii hal mar Mahadcelinta. Cunnooyinka Thanksgiving ee Wheels-ka waxay diyaariyaan cunno ka kooban turkey, labis, baradhada, digirta, galleyda, qolofleyda, duub, keega bocorka iyo caanaha qoysaska u baahan waxayna ku gaarsiiyaan cunnooyinkaas guryahooda maalinta mahadnaqa. Adeegani waa u diyaar dhammaan dadka u baahan - maahan kaliya waayeelka. Haddii aad xiiseyneyso inaad ku hesho Cunnada Thanksgiving ee Wheels waxaad kala xiriiri kartaa 651-699-5404 wakhti kasta wixii ka dambeeya Nofeembar 1.
Fursadaha kale ee cuntada kulul
Haddii aad haddaba cunto ka helayso mid ka mid ah barnaamijyadan soo socda, waxaad heli kartaa cunno mahadnaq kulul: CES Meals on Wheels iyo TRUST Meals on Wheels. Haddii aad xubin ka tahay barnaamijyadan, waxaad weydiisan kartaa inaad hesho cunto kulul maalinta Jimcaha: Wilder Foundation iyo TRUST Meals on Wheels.
Haddii aad raadineyso caawimaad
Haddii aad rabto inaad ku soo celiso Thanksgiving, laakiin aad rabto inaad ku sameyso hab madadaalo leh oo qoyska oo dhan ku lug leh, markaa Soco si Aad u Dhamayso Gaajada waa xulashada kuugu habboon adiga. Socodka Dhammaadka Gaajada waa socod saaxiibtinimo oo 5k qoys ah oo ka dhacaya Mall of America subaxda Thanksgiving. Dhammaan lacagaha ka soo xarooda dhacdadan waxay dib ugu laaban doonaan ururada samafalka ee magaalooyinka mataanaha ah ee ka shaqeeya la dagaalanka gaajada. Waad ballan qaadi kartaa halkan ugu lugee Cuntada Gawaarida. Dhacdadani waa hab fiican oo dib loogu celiyo intaadan mahadcelin.
Ikhtiyaarrada iskaa wax u qabso
CES Meals on Wheels oo ku taal magaalada Minneapolis ayaa wali raadinaya xoogaa wadayaal ah oo alaab keenaya maalinta Thanksgiving. Waad iska diiwaan gelin kartaa si aad u bixiso adoo wacaya 612-870-1125. Waad ku tabaruci kartaa Cunnooyinka Mahadcelinta ee Wheels adoo isku duba ridaya cuntada la siin doono kuwa u baahan, ama baabuur wadista iyo bixinta cuntada. Sidoo kale haddii aadan xiisaynayn inaad ku socoto Socodka Dhammaadka Gaajada, waad awoodaa iskaa wax u qabso ugu shaqee Gaajada Dhamaadka. Waxay raadinayaan mutadawiciin si ay u qabtaan hawlo kala duwan ha ahaato habeenka Arbacada ka hor dhacdada ama maalinta.
Haddii aad u malaynayso in adiga ama qof aad jeceshahay aad ka faa'iidi doonto helitaanka cunto joogto ah sanadka oo dhan waxaad iska qori kartaa boggayaga internetka. Waxaad sidoo kale iska qori kartaa noqo iskaa wax u qabso Cunnada joogtada ah boggayaga internetka. Tabarucidda Cuntooyinka Lugaha Lugood waxaa lagu sameyn karaa sida ugu badan ama ugu yar ee aad jeceshahay.
Nofeembar 15, 2016